SIDA LOO ABUURO LOONA DARYEELO BLUEBERRIES - BERRY
Blueberries Waxaa muddo dheer laga ogaaday aagahayaga, laakiin qof kastaa maaha inuu ku kobciyo. Beerta qaar ayaa aaminsan in dhibaatada dhirta ay ka badan tahay dalagga soo baxay. Qaar kalena ma yaqaanaan sida ay u koraan. Waxaan rajeyneynaa in arrinkani uu qof walba ka caawin doono inuu si habboon u koro warshadda.
Blueberry: sharaxaadda geedka
Blueberries - Waa geed caleemo qoyan oo qaar ka mid ah tixgelinayaan inay yihiin cirbadda tallaalka. Waxa kale oo ka mid ah blueberries, daloolka, lingonberries. Blueberries waxay leeyihiin nidaam xidid xambaarsan iyada oo aan lahayn timo xidid. Waxay leedahay caleemo cagaaran, ka dibna isbeddel lagu sameeyaa lafaha cylindral ee daboolka leh caleemo madow ama madow. Caleenta dhirta waa mid adag, yar yar, siman, oo dhan, oo leh geesaha goglan, oo gaaraya 3 cm dherer. Qaybta kore ee caleenta dhoobada ayaa ah mid adag, midab-buluug-cagaaran, iyo hooseeyna waa qoryaha iftiinka.
Ubaxyo shan jeer leh oo leh cadaan cad ama casaan. Waxay ku fidaa ilaa 6 cm dhererka, waxay leedahay 8-10 stamens, taas oo ka muuqda on dushooda laba laanood oo dhowr ah by qaybo dhowr ah. Burburku wuxuu ku koraa mitir, laakiin noocyo kala duwan ayaa la soo saaraa ilaa laba.
Ma taqaanaa? Blueberry, caadi ah ama hoos u dhacsan, dhiiqo, geed cidhib Inta badan waxay ku koraan gobollada qabooba iyo kuwa diirran ee waqooyiga dhexe.
Midhaha geedka ee dhirtu waa darajo, buluug leh ubaxyo nuugaya, oo gaadhaya 12 mm. Saxarka ee berry waa cagaaran. Celcelis ahaan, miisaanka hal berri waa 10 garaam, laakiin noocyada qaar ayaa soo saara miraha waaweyn oo culeyskiisu yahay 25 garaam. Xaaladdan oo kale, hal baadiyaha ayaa laga saari karaa ilaa 10 kg.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha noocyo kala duwan oo ku habboon in ay sii kordhaan ee caleen. Waxaa jira noocyo ah koriinka hore iyo kan dambe. Dhibaatooyinkayaga, waxaa lagula talinayaa in ay qaataan labada koowaad, maaddaama ugu dambeyntii aysan haysan waqti ay ku rusheeyeen boqolkiiba 30.
Doorashada meel loo abuuro blueberries
Goobidda iyo daryeelka ee blueberries waxay ku bilaabataa doorasho sax ah meel loogu talagalay ku xoortay geedihii. Wixii lagama maarmaan ah si loo go'aamiyo meel qorrax leh oo iftiin leh, iyo iftiin yar oo iftiin ah ayaa la oggol yahay, laakiin markaa berry ayaa noqon doona mid acidic ah. Iska hubi in biyaha dhulka aysan ku dhaafin meel u dhow meesha loo yaqaan 'landing'. Waa inay qulqulaan qoto dheer oo mitir ama ka badan. Waa suurad wacan in meel aan la daboolin dabaysha.
Ma taqaanaa? Warshadu waxay leedahay magacyo qaran: tuun, midab buluug, nacas, qoryo, gonobobel, sakhraan iyo kuwo kale. Badanaa dadku waxay ka cawdeen madax xanuun ka dib markii la isticmaalo. Laakiin cilmi-baarayaashu waxay ku doodaan in dhibaatadu aanay ku jirin blueberries, laakiin dhinaca ledum, oo inta badan soo baxaya inay tahay geedka dayax-gacmeedka. Berrygu waa mid aad u caawin kara.
Blueberries waxaa la beeray guga ama dayrta, laakiin beeritaanka guga waa la doorbidaa. Xilliga xagaaga, dhirta ayaa ka badbaaday goobta waxayna noqotaa mid u adkaysata dhaxan.
Si blueberries si fiican u helaan si fiican u on goobta, waxay u baahan tahay ka kooban ciidda ku haboon. Si fiican ku beeray carrada ciidda ama peaty, taas oo ah wax yar acidic ama acidic. Cawska dhoobada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa, laakiin markaa waa inay jirtaa biyo fiican oo ka hooseeya baadiyaha. Haddii ciidda beertaadu ay gebi ahaanba ka duwan tahay, waxaad abuuri kartaa sawiro leh shuruudaha noocaas ah.
Waa muhiim! Wixii beeritaanka waxaa lagu talinayaa in ay qaataan geedo ee weelasha ama dheryihii, taas oo ah, iyada oo nidaamka xidid xidhan. Si kastaba ha noqotee, marka la beero, xitaa qoryaha boodhka ah, daryeelka waa in loo qaato in aan waxyeeleynin xididdada jilicsan. Intaa waxaa dheer, xididdada qudhooda ma qaadan xidid leh qoryaha dhulka. Awoodda waa in la yareeyaa ilaa 15 daqiiqo biyaha, kadibna qaado buro leh seedling iyo si tartiib ah u duudduub si aad u toosiso xididada.
Warshadu ma jecla dadka horay u soo saartay, sidaas darteed ciidda blueberries waa in lagu hayaa qashinka dhowr sano ka hor intaan la beeri. Ka hor inta beerto, waxay ku qodayaan bacriminta organic iyo macdanta. Waa lagama maarmaan inay dhacdo dhacdadan xilliga dayrta, haddii dalabka loo qorsheeyay guga.
Dalag wanaagsan oo berry ah ayaa soo goostay kuwa bannaanka u ah ee yaqaan sida loo habeeyo blueberries. Ku beeray saf, oo ka soo jeeda waqooyi ilaa koonfur. Sidaas duurka u heli doonaa xaddiga ugu badan ee iftiinka. Masaafada u dhexeysa waxay ku xiran tahay nooca warshadaha: dheer waa in uu ku noolyahay meel fog oo mitir ah - hal iyo badh midba midka kale, iyo dadka gaaban - qiyaastii 60 cm.Laakiin haddii aad qorsheyneyso inaad ku korodho qiyaasta warshadaha, samee masaafada ugu yaraan laba mitir. Xaaladdan, inta u dhaxaysa safarka waxay awoodi doonaan in ay gudbaan farsamo khaas ah.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la go'aamiyo fasalka hore. Go'aanka waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso astaamaha cimilada halkaasoo lagu qorsheynayo inuu ku koro. Sidaas darteed, haddii ay ku koraan aag qabow, noocyada Canadian-growing ee gaaban ayaa si fiican u heli doona. Gobollada leh xagaaga dheer kulul, blueberries beerta waxay siin doontaa beeri wanaagsan. Haddii aadan filaynin muddada bislaado, dhammaan xanaanooyinkaaga daryeelka xanaanada waxaa laga yaabaa inaysan kufilan.
Beeraha iyo beeraha boodboodka
Blueberries waxaa lagu beeray dhulka, inta badan guga, ka hor inta aan ubaxu barar. Laakiin geedo waxaa laga helaa siyaabo kala duwan: abuurka, gooynta, laamaha, qaybinta baadiyaha.
Geedka Dheeriga ah ee loo yaqaan "Blueberry Seeds"
Kobcinta miraha blueberry waxaa laga yaabaa in ay tahay inta ugu badan ee qaadashada habka. Waxay ka goosanayaan xilliga dayrta laga soo bilaabo miro caafimaad leh oo buuxa. Ka dib markii ururinta miraha la qalajiyey oo lagu beeray sariiraha loogu talagalay beerista geedo. Waa inay noqoto carrada peat dufanka.
Inta lagu jiro beeritaanka guga, abuurka waa in marka hore la adkeeyo oo difaacooda la hagaajiyo. Si arrintan loo sameeyo, waxay u egtahay ciriiri. - ku hayso seddex bilood qaboojiyaha ku jira khudradda khudradda leh helitaanka hawada. Waxay sidoo kale lagu beeray sariiraha si qoto dheer ah oo mitir ah, iyo rusheeyey top of isku dar ah ciid iyo peat ee saamiga 3: 1.
Hadda for miraha u baahan daryeel taxadar leh. Waa inay yartahay qoyaan 40% iyo heerkulka hawada ee 23-25 ​​ºC. Si joogto ah uga saar haramaha. Xakee ciidda, biyo ku filan. Quudinta koowaad waxaa la samayn karaa hal sano oo kaliya ka dib markii lagu beeray abuurka. Goobtu waxay diyaar u tahay in la beero dhul furan muddo laba sano ah, waxayna bilaabi doontaa in ay midho u dhasho ilaa sideed.
Gowrida guntinta blueberry
Si dhakhso ah oo ammaan ah u koraya si ay u koraan blueberries ka gooyn. Iska yaree dayrta, ka dib markii dhirta ay hoos u dhigtay caleemaha, ama guga ka hor socodka dheecaan. Qaado guntooda xididka 8 - 15 cm dheer. Kaluumeysiga ka goynta, si dhakhso ah ayay xididdadu u sameysmi doonaan. Si ay si deg deg ah u degaan, waxaa marka hore lagu hayaa meel qabow heerkul ah 1-5 ºC. Markaas waa in lagu beeray isku dar ah oo ah peat iyo ciid (1: 3), iyo ku rusheeyeen on top of 5 cm oo kale. Geli guntooda galay substrate obliquely. Fasaxyada lagu beerayo dhul furan ayaa sidoo kale horumarinaya laba sano gudahood.
Ma taqaanaa? Sida caadiga ah, blueberry waa la beeray, taas oo ku kora jawi qabow iyo kulul. Laakiin weli waxaa jira blueberries beerta sare, kuwaas oo inta badan lagu koray America. Si kastaba ha ahaatee, jilayaasha American iyo Canadian waxay ku guuleysteen noocyada kala duwan ee isbeddelka, taas oo haatan koray dalka, laakiin gobollada koonfureed.
Habka loo qaybiyo baadiyaha
Waxaad ka heli kartaa geedo bluub oo cusub adigoo u qaybinaya baadiyaha. Sidaa darted, waxay ku qodayaan oo kala qaybiyaan, mid kasta oo ka mid ah waa inuu leeyahay xididada ugu yaraan 5 cm dhererka. Beeraha cusub ee geedo cusub ayaa isla markiiba la sameeyaa. Bushiska noocan oo kale, iyo sidoo kale kuwa ku beeray goynta, waxay bilaabaan inay midho dhasho kadib afar sano.
Geedaha Blueberry waa la heli karaa oo la dhigi karaa, laakiin waa geedi socod dheer oo aan dhammaystirnayn. Si arrintan loo sameeyo, qaado laanta dheer ee baadiyaha, leexo dhulka iyo meesha ay ku xiranyihiin, rusheeyeen sida balka. Waxay ku xidhan yihiin illaa laba ilaa saddex sano. Dabadeed laantu waa laga soocayaa waalidka waxaana lagu beeray sidii loo horumarin lahaa.
Mararka qaarkood samee habka kale - si xoogan u gooyaa baadiyaha, samee qiyaas laba keli ah Bacriminta macdanta ku wareegsan, ka dibna ku soo dhawee lakabka dhadhanka qiyaastii 25-30 cm. Xaaladdan oo kale, caleemaha yar yar ee koraya sanadkan, waxay qaadataa xidid laba - saddex sano. Markaas waxaad ka saari kartaa aqalka dhirta lagu koriyo, la gooyaa laamiyo caleemo leh oo ku beeraan weelasha. Waa in ay koraan laba sano oo kale, kadibna waxaa lagu beeray meel joogto ah. Waxay siin karaan berry ugu horeeya sanadka soo socda.
Farsamada Cawska ah ee Blueberry
Blueberries waxay u baahan tahay nidaam beerto gaar ah, taas oo aan ku xirnayn wakhtiga beerto. Wixii duurka u diyaargaroobaan godad si qoto dheer ah mitir iyo cabbirka ah 60 x 60 cm. Derbiyadeeda si fiican ayaa loo daboolay si ay u siiyaan helitaanka hawada xididada. Markaas, substrate ah peat-sare moor isku qasan leh 50 g oo ah baaruud, ciid, cirbadaha iyo sida balka ah la dhigay on hoose ee ceel. Waxaa muhiim ah in aanad qaadin Bacriminta dabiiciga ah iyo kuwa kale. Waxay alkalize ciidda, iyo waa inay noqdaan acidic.
Qoryaha ayaa loo yareeyaa godka waxayna ku fidiyaan xaglaha si siman dhamaanba diyaaradda oo dhan. Ka dibna waxay ku rusheeyeen ciidda si qoorta xididku u hooseeyaa dhulka hoostiisa qoto dheer oo ah 3 cm. Hadda waxaa loo baahan yahay in loo waraabiyo mulkiilaha 12cm, taas oo ah tufaax, caws, jilif ama balka sida loo isticmaalo.
Guga, sanadka ugu horreeya ee sapling nolosha, laamood xoog leh ayaa la gooyaa by kala badh, iyo laamihii daciifiyey waa la jaray. Sannadkii sanadka labaad lama fulin.
Horumarinta blueberries ee trellis ah
Blueberries Tallaal ayaa la kori karaa ma aha oo kaliya duurka, laakiin sidoo kale on trellis ah - naqshad qaboojiye oo taageera laanta geedka. Sidaa awgeed waxaad u baahan tahay inaad dhulka ku qodo meel fog oo ah 2 - 4 m laba mitir laba mitir ama taageerooyin alwaax ah. Inta u dhaxeysa iyaga waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo silig ee saf oo leh bareeg ah 40-50 cm.
Beeraha blueberries waxaa lagu sameeyaa silig fidsan oo leh tallaabo ah 70 cm inta u dhexeysa duurka. Marka laamaha laamaheeda la soo saaro, waxay si joogto ah ugu xidhmaan siligga. Xaaladdan oo kale, caleemaha waxaa la dhigayaa si ay mid waliba ugu hesho qadarka ugu badan ee kuleylka iyo iftiinka qorraxda.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in berry ee booska this si fiican u afuufay, iftiin iyo waraabiyo, waxay koraan badan oo casiir leh oo macaan. Si aad u daryeesho duurka u beeray habkan waa inay la mid noqdaan kuwa lagu beeray habka caadiga ah: quudinta, biyaha, mulch, jar.
Noocaan beerista noocan ah waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan noocyada soo socda ee blueberries:
Dhaqdhaqaaqyada daryeellada blueberries ma dhejin wax qaas ah. Waxay ubaahan tahay waraabinta, quudinta, dabacsanaanta, mulching, manjooyin. Loosinta waxaa la sameeyaa dhowr jeer xilli ciyaareed, laakiin si taxaddar leh. Rootiyada qulqulka qotomadu waa 15 cm oo keliya oo dusha sare ah. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa in mulch ay baadiyaha iyo xakameeyo ciidda, iyada oo aan ka saareen alaabta dusha. Laakiin tani waa in aan la sameeyo badanaa, si ay ciidda ma qalajin.
Warshadu waxay u baahan tahay waraabin adag. Biyaha waa inaysan istaagin meel u dhow xididada mudo ka badan laba maalmood, laakiin la'aanta qoyaanka waa wax xun in ay ku fiicnaanayso. Biyaha laba jeer toddobaadkii oo leh laba baaldiyaal oo kasta barkad weyn. Waxaa intaa dheer, mid ka mid ah waraabinta waxaa ku jira hordhaca hal baaldi subaxdii iyo hal qorrax ka dib. Bishii Luulyo iyo Agoosto, marka ubaxyada la dhajiyo iyo midho dhalinta bilaabmaa, waraabinta waa in si taxadar leh loo qaado.
Tayada dalagga waxay kuxirantahay qadar ku filan qoyaan. Marka beerista warshadaha ay bixiso waraabka faleebada ee blueberries. Maalmaha khaas ah ee kulul waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo dhirta goor hore subixii iyo fiidkii si looga fogaado kulaylka.
Dharka ugu sareeya iyo bacriminta blueberry
Warshadda waxaa loo tixgeliyaa inay hoos u dhigto bacriminta ciidda, laakiin codsiga macdanta macdanta ayaa si fiican u jawaabaya. Waxaa lagu talinayaa in ay keenaan guga hore, marka socodka dheecaan bilaabmayo iyo burooyinkeeda barara.
Waa muhiim! Blueberries ka hortaga Bacriminta organic!
Zinc sulfate, superphosphate, magnesium sulphate, sulfate potassium iyo ammonium sulphate waxaa si fiican ugu nuugay geedka. Ugu dambeyntii, taas oo loola jeedo Bacriminta nitrogen, waxaa lagu dabaqaa saddex marxaladood. Guga hore, waxay bixiyaan 40% heerka caadiga ah, horraanta May - 35%, Juun - 25%. Under hal baadiyaha waa lagama maarmaan in la dhigo 70 - 90 g.Tani waxay noqon doontaa ku filan baadiyaha ilaa guga soo socda.
Bacriminta Fosfooriga ee blueberries beerta (superphosphate) waxay ku kordhisaa 100 g halkii baadiyaha hal mar xagaaga iyo hal jeer xilliga deyrta. Zinc iyo potassium sulfate waxay bixiyaan 2 g hal mar xilli, magnesium sulfate - 15 g mid kasta.
Si blueberries si joogto ah u keeno, waa in la gooyaa. Gooyadu waxay noqon kartaa mid muuqaal ah iyo nadaafad. Midka koowaad waxaa la sameeyaa guga kahor intaan kelyaha la shubin. Gaar ahaan si taxadar leh, nidaamka waxaa lagu fuliyaa duurka da'doodu tahay 2 - 4 sano.
Wixii muhiim ah si aad u sameysid taaj adag, sidaa daraadeed, barafka, lafdhabarta, laamaha jiran iyo daciifka ah, iyo sidoo kale kuwa ka soo muuqday xididada, waxay ku xiran yihiin gudniinka. Waxa muhiim u ah inay ka baxaan 3 - 5 laan ka xoog badan. Laga bilaabo da'da afar jir, caleemaha shan jirka ka weyn ayaa sidoo kale la tooganayaa.
Waa muhiim! On duurka ee sanadka ugu horeeya ee nolosha waxaa lagula talinayaa in laga saaro ubaxyada oo dhan si dhirta si fiican u horumarin kartaa xilli ciyaareedka.
Gubashada farsamada waxay kuxirantahay nooca dhirta. Xaabood oo si toos ah u kora, gooyaa dhexda, iyo kicinta iyo hoos u jarjarey jarjar hoose. Sidoo kale fiiro u yeelo duurka deriska ah ee aan la dhexgalin laamaha.
Geedo nadiifin ah ayaa la qaadaa inta lagu jiro xilliga xagaaga. Isla marka aad aragto caleemo shaki leh, isla markiiba jarjar oo ka gubi goobta.
Qallajin, iyo sidoo kale dabcinta ciidda, waxay ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa heerarka loo baahan yahay ee qoyaanka ciidda ka hooseeya baadiyaha. Bark, sida balka, cirbadaha geed, caleemaha caleemaha, iyo cows ayaa loo isticmaalaa mulch. Mugsan geed canjeer ah ayaa siinaya duurka si aad u muuqata - duurka waxay si fiican u habboon yihiin naqshadda muuqaalka. Lakabka mulch waxay ku xiran tahay da'da geedka: blueberry waa weyn yahay, dhumucdeeduna waa inay ahaataa.
Waa muhiim! Isticmaalka alaabada cusub ee mulch wuxuu sii deynayaa koritaanka blueberries. Xaqiiqdu waxay tahay in xaalada this microorganisms si firfircoon u dhaleeceynaya wax, iyo waxay ka soo qaataan nitrogen ka soo ciidda. Sidaa darteed, marka la isticmaalayo mulch cusub, pre-ku dar qiyaas laba keli ah bacriminta nitrogen hoos baadiyaha.
Mulch wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hoos u dhigto furitaanka kelyaha guga iyo caleemaha dhirta dayrta ee dayrta. Sidoo kale, dhirtu waxay dareemeysaa heerkul aan fiicnayn oo hoos u dhigi kara. Laakiin hoyga sida, blueberries waxay soo saartaa caleemaha si aad u xoog badan, geedaha ayaa si fiican u raraya, taas oo sidoo kale ka caawisa inay u adkeyso qabowga.
Ubaxyo Bluebery waxay u dulqaadan karaan dhirta hoos udhaca -7 °, sidaa daraadeed dhicis guga uma badna inay saameeyaan heerka dalagga. Laakiin dhalidda xilliga dayrta, xitaa at -2 ° C, waxay burburin kartaa miraha aan weli qaangaarin. Si looga hortago dhimashadiisa, kahor xilliga dayrta ee duurka waxay tuuraan waxoogaa horumar ah, sida dhejinta, filimada, shumaca.
Mararka qaarkood waxaa lagula talinayaa in lagu rusheeyo dhirta inta lagu jiro muddooyinkaas - ku buufin biyo ka soocid yar oo khaas ah oo leh tuubo ama yar yar-yar-yar.
Su'aasha kale waa sida loo daboolo blueberries xilliga qaboobaha. Haddii ay ku saabsan tahay noocyo sarraysa, waxay si fudud u dulqaadan karaan dhirta hoos udhaca -25˚S. Laakiin haddii jiilaalka la bixiyo oo aan lahayn baraf ama qadar yar oo roobab ah, way xaaqi karaan. Xaaladdan oo kale, duurka ayaa sidoo kale lagu dabooli karaa ceyrinta, duufaan ama ku xiran lapnik. Si loo dhammeeyo, xilliga dayrta, qaababka taageerada iyo silig isku xiran oo dhexda u dhexeeya iyaga ayaa lagu rakibay duurka. Dhab ahaan, tani waa diyaarinta dhamaystirka blueberries ee xilliga qaboobaha iyo dhammaadka.
Khaladaadka caadiga ah marka koraya
Inkasta oo xogta si dhamaystiran loo baahiyo oo ku saabsan beerista blueberries, taas oo ku jirta domainka dadweynaha, bannaanka iyo bannaanka u sameeyaan tiro ka mid ah qaladaad caadi ah. Waxaa ka mid ah inay u qalantaa in la ogaado waxyaabaha soo socda:
1. Bannaan baadiyaha carrada qoyan ama dooxada hoose, iyada oo ku saleysan tixgelinta in blueberries dabiiciga ah ay ku koraan gudaha. Xaqiiqdii, duurjoogta, waxay ku koraan dhinacyada swamps, buuraha, hummocks, sidaa daraadeed xitaa xitaa qoyaanka. Qoyaan xad dhaafka ah ma siinayo hawo ku filan xididada, iyo xilliga qaboobaha ayaa wali ku hanjabaa qabow. Sidaa darteed, waayo, duurka ee blueberry waa inay doortaan meel leh qoyaan dhexdhexaad ah.
2. Cudurka sare ee ciidda. Qiimaha pH ee ka sarreeya 5.5, mantariga mycorrhiza kuma noolaan dhulka, taas oo kaalin muhiim ah ka qaadata nuugista nafaqooyinka geedka. Caleemaha Blueb waxay helayaan midab cagaaran, taas oo muujinaysa la'aanta nitrogen.
3. Xeebta dheer ee baadiyaha. Dhirta qudheedu waxay si fiican u kori kartaa hadhka, laakiin markaa waxay joojinaysaa in ay midho u dhasho ama siiso beero yar iyo midho goosashada. Sidaa darteed, haddii aad rabto badan oo berry casiir leh, siiyaan dhirta leh iftiin qoraxda iyo ugu yaraan dabaysha.
4. Kuwa horay u qaldan. Blueberry ka dheer caleemo dilka ah, dad tiro yar ayaa ka xanuunsan ka hor. Sidoo kale uma dulqaadan karo carrada la bacrimiyay in ka yar shan sano ka hor.
5. Xadgudubyada xeerarka xulashada iyo diyaarinta geedo beerashada. Dad badan ayaa u maleynaya in haysashada tiro badan oo ka mid ah laaluushku waa dammaanad qaadashada nolol wanaagsan. Xaqiiqdii, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar u yeelato nidaamka xididka geedka. Haddii ay ku jirto dheriga dhaadheer iyo xididada waxaa lagu duuduubay gudaha, sida geedka noocaas ah waa daciifay. Markuu ku dhacay xaaladdan, ma heli doontid natiijada laga filayo. U hubso inaad toosiso oo aad u furtaa xididdada geedka ka hor intaadan beeran. Naftooda ma sameyn doonaan, nidaamka xididna ma kori doono.
6. Waxyaabaha aan habooneyn iyo qiyaasta bacriminta. Многие думают, что голубику можно подкармливать теми же удобрениями, что и другие ягодные кустарники. Но на самом деле привычная органика и хлористые минеральные удобрения губительны для того самого грибка микориза, который живет на корнях растения и помогает ему усваивать питательные вещества.Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo Bacriminta macdanta kaliya ee la isticmaalo ugu dambeyn badhtamaha June.
7. Fidinta xad dhaafka ah ee ciidda. Tan iyo nidaamka xididka ee baadiyaha waa u dhow dusha sare, loosening waa in la fuliyaa wax qoto dheer ka badan 3 cm, iyo marka jaridda dhirta, ha isticmaalin hoe iyo qalabka kale beerta. Waxaa lagula talinayaa in la daboolo ciidda. Tani waxay ka badbaadin doontaa haramaha, cayayaanka, cudurrada, hagaajinta heerkulka iyo nidaamka biyaha-hawada. Loosinta mulch wuxuu caawiyaa ilaalinta xididada jilicsan, taas oo, haddii ay waxyeello, aad si tartiib ah dib loo soo celiyo.
Maanta, bannaanka u xiiso sii kordhaya blueberries sii kordhaya iyo ururinta berry caafimaad leh iyo dhadhan fiican leh. Laakiin dad yar ayaa ogaanaya daryeeshaa waxay ka duwan tahay duurka berrida caadiga ah. Intaa waxaa dheer, sugitaanka goosashada ugu horeysay waxaa laga yaabaa in dib loo dhigo dhowr sano.
Xaaladdan oo kale, khaladka kasta wuu diidi karaa sanadaha shaqada. Sidaa darteed, ka hor inta aan la samaynin beerashada blueberries, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo baaro dhaqankooda beeraha. Si habboon oo habboon, waxaa lagugu siin doonaa khudradda hodan ah iyo casiir leh ee miro yar yar.